Nzuzo - Propars E -mbupụ
Amụma nzuzo Propars
'Amụma nzuzo' bụ nkwupụta na -ekwupụta otu, mgbe, maka ogologo oge yana maka ebumnuche ndị na -akwalite, dị ka ụlọ ọrụ, ụdị ozi nkeonwe nke ndị ọrụ www.propars.net kesara na -eji ma chekwaa ya na nkwenye ha.
Webụsaịtị www.propars.net na -eji ozi nkeonwe nke ndị ọrụ ya zigara ya na elektrọnik, naanị n'okwu akọwapụtara na iwu na nkwekọrịta ndị otu ya na ndị otu ya, n'ime ebumnuche akọwapụtara ya.
Ozi a anakọtara na elektrọnik; A na -eji ọrụ mkpọsa naanị n'ime www.propars.net iji rụọ ọrụ nkwado pụrụ iche maka profaịlụ gị.
Iji chọpụta nsogbu nwere ike ime na webụsaịtị yana idozi nsogbu ọrụ aka, ịzụ ahịa oge adịghị mma na/ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ nwere ike ime ozugbo, saịtị ahụ na -edobe ndekọ ndekọ IP nke ndị ọrụ n'ime oge akọwapụtara na iwu.
Na webụsaịtị, site na ijupụta n'ụdị dị iche iche na ịtụ vootu, ụfọdụ ozi gbasara onwe ha (dịka aha nna, adresị, ozi ụlọ ọrụ, ekwentị, nọmba TR ID, okike ma ọ bụ adreesị ozi-e) ka edere na ọdụ data nke weebụsaịtị. .
N'ime ebumnuche na oke nke nkwekọrịta ndị otu kpebisiri ike, ọ bụrụ na onye ọrụ akwado, ọ nwere ike gwa ndị ọrụ gbasara ngwaahịa na ego ọhụrụ site na nkwukọrịta elektrọnik maka ebumnuche mgbasa ozi na/ma ọ bụ ahịa.
N'ọnọdụ ndị pụrụ iche akọwapụtara n'okpuru, ewezuga ndokwa nke nkwupụta nzuzo a na nkwekọrịta ndị otu ya na onye otu ahụ mechiri, ozi nke ndị ọrụ nwere ike kpughere ndị ọzọ n'okwu ndị a:
Nkeji edemede 6 - A)
Ọ bụrụ na enwere iwu a ga-eso n'ime iwu dịka Iwu, Iwu, Iwu-Iwu, Iwu, Iwu, Iwu, wdg,
Nkeji edemede 6 - B)
N'ihe banyere ịrịọ ozi gbasara ndị ọrụ ma ọ bụrụ na nyocha ma ọ bụ ịgba akwụkwọ nke ụlọ ọrụ nchịkwa ikike yana/ma ọ bụ ndị ọka ikpe mere nke ọma.
Ewezuga ewezuga mmụba a kpọtụrụ aha n'elu, ọ na -agba mbọ idobe ozi nkeonwe ma ọ bụ ụlọ ọrụ nke ndị ahịa ya na nzuzo na nzuzo, weere ya dị ka ọrụ nzuzo, na ime usoro niile dị mkpa ma gosipụta ịdị uchu iji hụ na idobe nzuzo.
Ozi nkeonwe gị nke nwere mmetụta dị nro, dị ka ozi kaadị gị rịọrọ na ịkwụ ụgwọ kaadị kredit abanye n'oge azụmahịa ịkwụ ụgwọ, a na -ebufe ya na -akpaghị aka gaa na ngalaba dị mkpa nke ụlọ akụ dị mkpa site na sava anyị nwere asambodo SSL, nke na -eme azụmahịa echekwara, ọ nweghịkwa onye ọ bụla na -ekerịta ya. nke ndị ọrụ anyị ma ọ bụ ndị otu 3rd, echekwaghị ozi a.
A na -eji ụdị ụlọ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ ozi onye ọrụ nyere ka ọ bụrụ onye otu saịtị iji kpọtụrụ onye ahịa ahụ yana inye ndị mmekọ azụmahịa ozi nnyefe maka nnyefe ngwaahịa a. Ewezuga nke a, ọ bụrụ na enwetara nkwado dị ka Iwu dị na Iwu nke Azụmaahịa elektrọnik, ụlọ ọrụ otu ozi elektrọnik ahịa na/ma ọ bụ ndị mmekọ azụmahịa nwere ike iji ya maka ebumnuche nkwado na ire ahịa, iji gwa gị ngwaahịa ọhụrụ, maka mgbasa ozi na ebumnuche ahịa.
Iji nye nsonaazụ ngwa ngwa na arụmọrụ karịa na saịtị ahụ, a na-eji 'kuki' maka ebumnuche 'njirimara nnọkọ', iji mata ndị ahịa n'oge ntụgharị n'etiti ibe, iji zere mkpa ịdebanye aha ọzọ na ntughari ibe ọ bụla. na ịnweta ozi ị nyere n'oge ndebanye aha. A na -edebe kuki na ntanetị ozugbo ọ naghị adịkwa mgbe ị na -ahapụ ibe anyị. Ngwa a anaghị echekwa ma ọ bụ chekwaa data gbasara gị yana ngwaọrụ ị na -eji. Ị nwere ike jụ ịnabata 'kuki' site n'ịgbanwe ntọala kuki gị. Nke a bụ ikpe; Ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume iji atụmatụ mmekọrịta niile dị na saịtị ahụ. Ozi gbasara nchedo data onwe
Nkeji edemede 1 - Ozi OZI
Dị ka www.propars.net, dabere na Iwu gbasara nchekwa data nkeonwe Nọmba 6698 ('KVKK'), na akwụkwọ ozi 'Ozi' a kwadebere n'ike njikwa data, a na -agwa anyị na 10th na 'Ịma ọkwa nke onye njikwa data 'na KVKK na' Onye dị mkpa n'ime usoro nke edemede 11 akpọrọ 'ikike'; A haziri ya ịnye ozi gbasara ebumnuche nke a ga -ahazi data nke gị, onye na maka ebumnuche enwere ike ibugharị data nkeonwe gị, usoro na ihe kpatara iwu maka nnakọta data nkeonwe gị, yana ikike ndị ọzọ edepụtara. na edemede 11 nke KVKK.
Nkeji edemede 2 - Ebumnuche nke ịhazi data nkeonwe gị
Ịmepụta na ịrụ ọrụ ọnụ ụzọ azụmaahịa elektrọnik na ire ụdị ngwaahịa na ọrụ niile site na ndị a, 'www.propars.net', nke ụlọ ọrụ anyị, nke na -arụ ọrụ n'ubi akọwapụtara nke ọma na Ndekọ nke ụlọ ọrụ, n'ihi ụdị ọrụ a; A na -anakọta ma hazie data nkeonwe gị n'ihi ma Iwu nke 6563 na Iwu nke Azụmaahịa elektrọnik, Iwu nke 6502 maka Nchedo onye ahịa yana iwu nke abụọ, ụkpụrụ na nkwekọrịta anyị mechiri. A ga -eji data nkeonwe gị nye ọrụ metụtara mpaghara ọrụ ụlọ ọrụ anyị na ịbawanye mma nke ọrụ ndị a, ime ahịa, ire ahịa na ọrụ ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ anyị, ịgbaso nchekwa ozi, ịkọ akụkọ na ịkọwa ọrụ dịịrị ndị na -eweta ngwaahịa. na ndị na -enye ọrụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, enwere ike iji data nkeonwe gị n'ime oke ọmụmụ dị ka omume njikwa mmekọrịta ndị ahịa nke a ga -eme maka ire ahịa na azụmaahịa, yana ịbawanye ogo ọrụ anyị na -enye gị.
Nkeji edemede 3 - Nkọwa zuru ezu na data nkeonwe
Ọ nwere ike iji ozi ndị ọrụ webụsaịtị nyefere ya na gburugburu elektrọnik, 'Nkwekọrịta ndị otu' ya na ndị otu ya, n'okwu akọwapụtara na iwu, n'ime ebumnuche na okirikiri akọwapụtara. Ozi a anakọtara; A na -eji ọrụ mkpọsa rụọ ọrụ nkwado pụrụ iche maka profaịlụ gị. Saịtị ahụ na -edobe ndekọ ndekọ IP nke ndị ọrụ n'ime oge akọwapụtara na iwu, mgbe ọ dị mkpa, iji chọpụta nsogbu nwere ike ime na webụsaịtị yana idozi nsogbu ọrụ aka, ịzụ ahịa oge adịghị mma na/ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ nwere ike ime. ozugbo. N'ime webụsaịtị a, a ga-edebanye aha ndị ọrụ na ọdụ data nke weebụsaịtị site na dejupụta ụdị dị iche iche na ịtụ vootu, yana ụfọdụ ozi gbasara onwe ha (dịka aha nna, adresị, ozi ụlọ ọrụ, ekwentị ma ọ bụ adreesị ozi-e). N'ime ebumnuche na oke nke nkwekọrịta ndị otu kpebisiri ike, ọ bụrụ na onye ọrụ akwado, ọ nwere ike gwa ndị ọrụ gbasara ngwaahịa na ego ọhụrụ site na nkwukọrịta elektrọnik maka ebumnuche mgbasa ozi na/ma ọ bụ ahịa. Ozi nkeonwe gị, dị ka ozi kaadị gị rịọrọ na ịkwụ ụgwọ kaadị kredit etinyere n'oge azụmahịa ịkwụ ụgwọ, na -ebuga ya ozugbo na ngalaba dị mkpa nke ụlọ akụ dị mkpa site na sava SSL asambodo anyị, nke na -eme azụmahịa echekwara. Ewezuga usoro iwu, onye ọrụ anyị ọ bụla ma ọ bụ 3. Ọ naghị eso ndị ọzọ ekerịta ya, echekwarakwa ozi a. A na -eji ozi onye ọrụ nyere ka ọ bụrụ onye otu saịtị iji kwurịta okwu na onye ahịa ahụ yana inye ndị mmekọ azụmahịa ozi nnyefe gị maka nnyefe ngwaahịa a. Ewezuga nke a, ọ bụrụ na enwetara nkwado dị ka Iwu dị na Iwu nke Azụmaahịa Eletrọnik, ụlọ ọrụ otu ozi elektrọnik azụmahịa na/ma ọ bụ ndị mmekọ azụmahịa nwere ike iji ya maka ebumnuche nkwado na ire ahịa, iji gwa gị ngwaahịa ọhụrụ, maka mgbasa ozi na ebumnuche ahịa. Iji nye nsonaazụ ngwa ngwa yana ọfụma, ọ na-eji 'kuki' maka ebumnuche 'njirimara nnọkọ' iji mata ndị ahịa ya mgbe ha na-atụgharị n'etiti ibe na weebụsaịtị yana iji zere mkpa ịdebanye aha ọzọ na ntughari ibe ọ bụla yana ịnweta. ozi ị na -enye n'oge ndebanye aha. A na -edebe kuki na ntanetị ozugbo ọ naghị adịkwa mgbe ị na -ahapụ ibe anyị. Ngwa a anaghị echekwa ma ọ bụ chekwaa data gbasara gị yana ngwaọrụ ị na -eji. Ị nwere ike jụ ịnabata 'kuki' site n'ịgbanwe ntọala kuki gị. Nke a bụ ikpe; Ọ nwere ike ọ gaghị ekwe omume iji atụmatụ mmekọrịta niile dị na saịtị ahụ. Agaghị eji data nkeonwe gị maka ebumnuche ndị ọzọ karịa nke akọwapụtara na ederede ozi a na -enweghị nkwenye gị, agaghị ekerịta ma ọ bụ bufee ya na ndị ọzọ, belụsọ maka ọrụ iwu yana ụlọ ọrụ/otu ndị ọrụ. Ụlọ ọrụ anyị, data nkeonwe gị nọ na ajụjụ naanị; Ọ mejupụtara ihe ndị dị mkpa maka nkwekọrịta a kwụsịrị n'etiti ndị ọzọ. Ewezuga nke a, data niile a ga -arịọ ga -adị n'okpuru nkwenye doro anya nke ndị ahịa ma ọ bụ n'iwu anyị nọ n'okpuru, nka KVKK.
Nkeji edemede 4 - Usoro nke ịchịkọta data nkeonwe
Data nkeonwe gị, dịka iwu siri dị; Enwere ike ịnakọta ya n'okwu ọnụ, na ederede ma ọ bụ na elektrọnik site na ọwa dị ka ụlọ ọrụ anyị, ndị mmekọ, ndị mmekọ, ndị na -ere ahịa, ndị na -ebubata ngwaahịa, ndị mmekọ ngwọta nke anyị na -akwado ma ọ bụ nwee mmekọrịta nkwekọrịta.
Nkeji edemede 5 - Idozi data nkeonwe gị wee mezie ya
Ndị na-ekerịta data nkeonwe ha na ụlọ ọrụ anyị maara na izi ezi na ichekwa ozi ọhụrụ a dị mkpa maka ikike ha nwere gbasara data nkeonwe ha dabere na Iwu gbasara Nchedo Data Nkeonwe Nke 6698 na ihe ndị ọzọ dị mkpa. iwu, ha ga -abụkwa ndị ọrụ ha kpam kpam maka ịnye ozi ụgha, anabatara ma kwupụta. Ị nwere ike ịme mgbanwe na/ma ọ bụ mmelite gbasara data nkeonwe ịkekọrịtara na akaụntụ ndị otu gị.
Nkeji edemede 6 - Oge nchekwa data nkeonwe
N'ikwekọ n'iwu nke 6563 na iwu nke azụmaahịa elektrọnik; A ga -edobe ndekọ gbasara mwepụ nke nkwado maka afọ 1 site na ụbọchị a, na ndekọ ọ bụla ọzọ gbasara ọdịnaya nke ozi elektrọnik azụmahịa na ọkwa ahụ ga -edobe maka afọ 3 iji nyefee ya na Minista mgbe ọ dị mkpa. Mgbe oge gafere, anyị ga -ehichapụ, bibie ma ọ bụ zoo aha anyị ma ọ bụ rịọ gị. Tụkwasị na nke ahụ, a na -echekwa data okporo ụzọ anyị na -ahazi dịka Iwu Nke 5651 maka Ịhazi Mgbasa Ozi na Internetntanetị na ịlụso mpụ a na -eme site na Mgbasa Ozi ndị a echekwara afọ 2 ma ghara ịkọwa aha ya mgbe oge ahụ gwụchara.
Nkeji edemede 7 - Ihichapu, ibibi ma ọ bụ ịkọwa data nkeonwe gị.
A haziri data nkeonwe gị maka ebumnuche akọwapụtara na ederede Ozi a; KVKK nka. A ga -ehichapụ ya, bibie ya ma ọ bụ hapụ aha ya wee gaa n'ihu na -eji ya mgbe ebumnuche nke chọrọ nhazi dịka 7/f.1 ga -apụ n'anya na oge nke Iwu kpebiri.
Nkeji edemede 8 - IHE NKE ECHICHE Ichekwa data nkeonwe
Nchedo data nkeonwe bụ okwu dị mkpa maka ụlọ ọrụ anyị. Ụlọ ọrụ anyị na -eme ihe ndị dị mkpa iji kpuchido data nkeonwe megide nnweta ma ọ bụ mfu na -enwetaghị ikike, iji ya eme ihe, mkpughe, mgbanwe ma ọ bụ mbibi nke ozi a. Ụlọ ọrụ anyị na -agba mbọ idobe data nkeonwe gị, iji were usoro ọrụ nhazi na nhazi niile dị mkpa yana iji gosipụta ịdị uchu maka ịhụ na nzuzo na nchekwa. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ anyị ewerela usoro nchekwa ozi dị mkpa, ọ bụrụ na emebi data nkeonwe n'ihi mwakpo webụsaịtị na sistemụ, ma ọ bụ ọ bụrụ n'aka ndị ọzọ, ụlọ ọrụ anyị ga -agwa gị ozugbo na Nchedo Data Nkeonwe. Ogwe.
Nkeji edemede 9 - ikike ndị ọzọ ekwuru na edemede 11 nke KVKK
Site n'itinye aka na ụlọ ọrụ anyị, data nkeonwe gị; a) ịmụta ma ahaziela ya, b) ịrịọ ozi ma ọ bụrụ na edoziri ya, c) ịmụta ebumnuche nhazi na ma ejiri ya mee ihe na ebumnuche ya, ç) ịmara ndị ọzọ nke ebugara ya na obodo / na mba ofesi, d) ịrịọ mgbazi ma ọ bụrụ na ezughị ezu / hazie ya nke ọma, e) KVKK 'Ị rịọ ka ehichapụ / mbibi n'ime usoro nke ọnọdụ akọwapụtara na Nkeji edemede 3 nke Iwu, f) ịrịọ arịrịọ maka azụmahịa ndị emere dabere na paragraf (ç) na (d) nke dị n'elu, na ndị nke atọ ebugara ya, g) ịjụ mpụta nke nsonaazụ megide gị n'ihi na ọ na -enyocha ya naanị site na sistemụ akpaka, ğ) ị nwere ikike ịrịọ ka akwụghachi ụgwọ mmebi ahụ ma ọ bụrụ na ị merụọ n'ihi nhazi iwu akwadoghị. Iwu nke 7 nka. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị oge niile site na iziga ozi na info@propars.net iji gosipụta ikike gị edepụtara na Nkeji edemede 6698. www.propars.net